Ururka Al-shabaab ee Soomaaliya oo lagu eedeyey kiisaas lidi ku ah xuquuqda dadka oo ay fuliyeen – Radio Daljir
Ururka Al-shabaab ee Soomaaliya oo lagu eedeyey kiisaas lidi ku ah xuquuqda dadka oo ay fuliyeen
Janaayo 29, 2014 1:09 b 0
Geneva, January 29, 2014 – Hay?adda human rights watch ayaa kooxda Al-shabaab ee Soomaaliya ku eedaysay in ku xadgudubto xuquuqda aadanaha gaar ahaan meelaha ay ka taliso, sidoo kale war-bixinta waxaa lagu dhaleeceeyey dowladda Soomaaliya.
War-bixin ay soo saartay HRW ayaa lagu sheegay kooxda al-shabaab ay askarayso dadka waa wayn iyo caruurta, sidoo kale waxay ku kacdaa kooxdu falal ay ka mid yihiin inay hor istaagto xuquuqda asaasiga ah ee ay dadku leeyihiin.
Al-shabaab waxay fulisay dilal qorshaysan, dal-dalaad iyo gowracyo sida lagu sheegay war-bixin ka hadlaysay xad-gudubka xuquuqda aadanaha Soomaaliya oo soo baxday, weerarada ismiidaaminta oo iyana khasaare nafeed oo rayid ah geysta ayaa ururka lagu eedeyey.
War-bixinta waxaa ka dhex muuqday dhowr tusaale oo ay ka mid yihiin weeraradii bishii apriil sanadkii hore iyo kuwa kale oo iyana ka dhacay Muqdisho iyo meelo kale oo dalka ka tirsan.
Dowladda iyo ururka al-shabaab ayaa si wadajir ah loogu sheegay inay geystaan weeraro aan loo m eel deyin
Human rights watch ayaa ugu dambayntii baahisay in Soomaaliya ay baaqi ku yihiin weli kiisaska lidiga ku ah xuquuqda dadka, waa meesha ugu khatarta badan ee ay ka howlgalaan saxafiyiin caalamka oo idil.
UNHCR ?42 kun oo magangelyo doon Soomaali ah baa galay dalalka deriska ah sanadkii tegey?
Madaxweyne Xasan oo madaxda Afrika kala hadlaya ciribtirka kooxda Al-shabaab ee Soomaaliya